‘पाँचखाललाई नमूना शहर बनाउँछु’ « Naya Page
‘पाँचखाललाई नमूना शहर बनाउँछु’
प्रकाशित मिति : August 21, 2016
राजधानीबाट नजिकको एक प्रमुख नगर हो, पाँचखाल नगरपालिका । यो नगरमा लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेकी नेतृ भक्तकुमारी लामा नेकपा एमालेबाट उपमेयका उमेद्वार छन् । स्नातकोत्तर गरेकी अनेरास्ववियुको पूर्व सचिव लामा ०५६ बाटै विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिइन् । ०५९ मा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय लामा ०६१ माघ १९ को शाही ‘कू’विरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिकामा थिइन् ।
आन्दोलनकै क्रममा ०६१ चैत २७ मा शाहीशासनविरुद्धको आन्दोलनमा गिरफ्तारीमा परिन् र ६ महिना जेलजीवन बताइन् । दोस्रो जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी लामा प्रहरीको गोली लागेर घाइते समेत भइन् । महाभूकम्पपछि एमालेले सञ्चालन गरेको स्वयमसेवी अभियानमा टोली नेताको रुपमा खटिएकी थिइन् । पाँचखालनगरको विकास निर्माण र विभिन्न सामाजिककाममा समेत सक्रियलामासँग स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी नयाँपेजले गरेको कुराकानीः
विद्यार्थी राजनीतिपछि अब तपाईँ उपमेयर बन्नुहुने भो होइन त ?
–डेढ दशक लामो विद्यार्थी राजनीतिको क्रममा मेची–महाकाली पुगेँ । सबै ठाउँमा विकास र समृद्धिले पर्खिरहेको पाएँ । देशविकासको प्रारम्भ विन्दु र जनताको सबै भन्दा नजिकको निकाय भनेको अहिलेको संरचनाअनुसार स्थानीय तह नै हो । वास्तवमै नेपाली जनताको गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने सदियाैँदेखिको चाहाना पुरा भएको छ ।
यसले अनेकौ अवशरहरु प्रदान गरेको छ । सबै स्थानीय निकायले चुस्त काम गर्‍यो भने केही वर्षमै देशले ठूलो फड्को मार्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर, यसका लागि भिजन भएको नेतृत्व चाहिन्छ । आफ्नो ठाउँको सेवा गर्ने चाहाना, पार्टी नेता–कार्यकर्ता र सहयोद्धाहरुको विश्वासका कारण म उम्मेदवार भएर प्रस्तुत भएकी छु । यसमा स्थानीय जनताको उत्साहजनक समर्थन पाइरहेकी छु ।
के छ तपाईँको चुनावी एजेन्डा ?
–पाँचखाल देशकै एक नमूना सहर बन्न सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ हो । यो नगरलाई मैले निक्कै राम्रो अध्ययन गरेको छु । नजिकबाट चिनेकी छु । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र यहाँस्थित बुद्धिजिवीहरुका संयुक्त पहलमा पाँचखाललाई नमूना सहर बनाउँने अनेकन योजनाहरु बनाएका छौ । यो खाली चुनावी नारा भन्दा पनि पाँचखाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्ध बनाउँने बृहत योजना हो । हाम्रा योजनाहरु वास्तवमै पाँचखालबासीले देख्न र महसुस गर्न सक्नेछन् ।
पाँचखाललाई देशकै एक नमूना कृषि सहर बनाइनेछ । त्यसको अध्ययन्, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिने छ । सिंचाइका लागि इन्द्रवातीबाट नहर ल्याइने छ । खेतीयोग्य सबै जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गरिने छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेछौ । कृषिउपजका वस्तुहरुका लागि व्यवस्थित बजारको व्यवस्था गरिने छ । हरित सहर निर्माणका लागि बजार क्षेत्रमा कौसी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नेछौ । एकीकृत वस्तीको निर्माण गर्नेछौ । नगरभित्र चक्रपथको निर्माण हुनेछ । अहिले ग्राभेलिङ भएका सबै सडकहरु पक्की बनाउँछौ । असाहय, अनाथहरुका लागि निःशुल्क यातायातको व्यवस्था हुनेछ । राजधानी काठमाण्डौबाट नजिकका सहर भएकाले यहाँ धेरै मानिसहरुको व्यापार व्यावसाय काठमाण्डौमा छ । त्यसैले दैनिक आवतजावत गर्न विशेष सुविधा सम्पन्न सवारी साधनको व्यवस्था गर्नेछौ । निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनेछ । हरेक वडाका कम्तीमा एक सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्नेछौ । प्रत्येक वडामा व्यवस्थित खेल मैदानको निर्माण गर्नेछौ ।
खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहित हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ । पर्यटन विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी सारेका छौँ । विभिन्न जातजातीहरुको पहिचान झल्कनेगरी एक बहुसाँस्कृतीक संग्राहलयको निर्माण गर्नेछौ । ठाउँठाउँमा पार्कत थाबाल उद्यानहरु बनाइने छ । पार्कहरुमा फ्री वाईफाई हुनेछ । निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यावस्था हुनेछ । प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थपना गर्नेछौ । सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क सिपयुक्त प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छौ । युवा उद्यमशिलता र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइने छ ।
नगरको सबै क्षेत्रमा पहुँच हुनेगरी एफएफको स्थापना गर्नेछौ । जहाँ स्थानीय भाषाभाषीको कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिनेछ । पत्रपत्रिकालगायत अन्य सञ्चारका माध्यमहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । व्यवस्थित सूचना प्रणलीको विकास गरिनेछ । नगरवासीले घरमै बसीबसीनगरका सबै जानकारीहरु पाउँनेछन् । हाम्रो पाँचखालनगरपालिकामा कोही पनि बेरोजगार भएर बस्न पाउँने छैन । त्यति धेरै रोजगार र अवसरको सृजना गर्नेछौ । कोही उपरखुटी लगाएर बस्छ भने उसैलाई लाजहुने परिस्थितिको निर्माण हुनेछ ।
तपाईको चुनाव जित्ने आधार ?
–हामीसँग सबै भन्दा ठूलो कुरा भिजन छ । पाँचखाललाई कसरी समृद्ध र विकास बनाउने भन्ने ठोस् योजना र कार्यक्रमहरु छन् । नेकपा एमाले सँधै योग्यता, क्षमता र क्रियाशिलतामा विश्वास गर्छ । हाम्रा सबै उम्मेदवार योग्य र क्षमतावान छन् ।
मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मका उम्मेदवारहरु लामो समयदेखि यस ठाउँमा विकास निर्माण र समाजसेवामा प्रतिवद्ध छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीसँग उर्जाशील जुझारु नेता, कार्यकर्ता र उत्साही मतदाता छन् । यसकारण हामीपाँचखाल नगरपालिकामा मात्र होइन, देशभर नै विजयी हुनेछौ ।